Tag: scott dorsey | Martech Zone
Tag: scott dorsey mechie
Friday, July 28, 2017 Friday, July 28, 2017 Douglas Karr
Ọpụrụiche n'etiti ndị ọrụ ụlọ ọrụ ya, onye isi ụlọ ọrụ Jeremy Bloom nwere ọrụ dị egwu dịka ọkachamara egwuregwu. Ọ bụ onye na-akwado Hall-of-Fame, onye mmeri ụwa atọ, onye Olympia ugboro abụọ na oge iri na otu nke mmeri ọla edo World Cup. Ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, Jeremy bụ onye Amerịka niile na Mahadum Colorado yana ihe gbara agba agba nke ise na Philadelphia Eagles. Ọ gwụchara ọrụ NFL ya na Pittsburgh Steelers. Echere m na m gaara agwa Jeremy okwu ọtụtụ awa, mana nke a bụ
Mere ExactTarget na CoTweet Na-eme Sense
Wenezdee, Machị 3, 2010 Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Douglas Karr
Na mbu ozi a wụrụ m akpata oyi, ExactTarget na CoTweet? Email na Twitter? Ọ dị ha ka ụmụ nwanne nne m dị anya, enwetaghị m ya. N'abalị a, agwara m Chris Baggott, onye nchoputa ExactTarget na onye isi ugbu a nke Compendium Blogware. Chris enweghị ike ikwu oke ihe banyere ịkwaga ahụ, nwere obi ụtọ maka Scott Dorsey… wee kọwaa etu o si bụrụ ihe ezi uche dị na ya: Email na Twitter adịghị ka ibe ha. Ha
Otu n'ime ihe ngosi ndị na-adọrọ mmasị karị nke emere na ExactTarget Connections, ụnyaahụ, bụ ezigbo ngosi mmekọrịta mmekọrịta nke Scott Dorsey, CEO, mere n'oge mmeghe okwu. Scott gwara onye ọ bụla ka ederede ederede nyocha na adreesị ozi-e ha na 38767 iji nweta Forrester's 2009 Channel Preference Study na Ahịa Ahịa bụ Ahịa Ahịa. Na oge, nzaghachi ozi ederede zigara azụ na-akwado arịrịọ ahụ ma na-arịọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnata ozi olu